मध्य उमेर मा अवसाद र ताउ बयान बीचको सम्बन्ध के हो?
26-08-21 मा व्यवस्थापक द्वारा
यूटी हेल्थ स्यान एन्टोनियो र यसका साझेदार संस्थाहरु मा शोधकर्ताहरु द्वारा एक नयाँ अध्ययन को अनुसार, अवसादग्रस्त लक्षणहरु संग मध्यम उमेरका मानिसहरु APOE नामक प्रोटीन बोक्छन्। Epsilon ४ मा उत्परिवर्तन मस्तिष्क को क्षेत्रहरु मा टाउ बिल्डअप उत्पादन गर्न को लागी अधिक सम्भावना हुन सक्छ कि मू।
जेनिफर मिहास एक सक्रिय जीवनशैली को नेतृत्व गर्न को लागी, टेनिस खेल्दै र सिएटल को वरिपरि हिंड्थे। तर मार्च २०२० मा, उनले COVID-१ for को लागी सकारात्मक परीक्षण गरे र तब देखि बिरामी छिन्। अहिले सम्म उनी सयौं गज हिँडेर थकित भैसकेकी थिइन्, र उनी सास फेर्न गाह्रो भईन् ...
जब यो चकलेट को लागी आउँछ, यो सबै समय को बारे मा छ!
के चकलेटले तपाइँलाई मोटो बनाउँछ? यसमा कुनै शंका छैन जस्तो देखिन्छ। उच्च चिनी, बोसो, र क्यालोरी को एक प्रतीक को रूप मा, एक्लै चकलेट एक dieter भाग्न को लागी पर्याप्त जस्तै लाग्छ। तर अब हार्वर्ड युनिभर्सिटीका शोधकर्ताहरुले पत्ता लगाएका छन् कि सही समयमा चकलेट खान ...